Jaamacada jigjiga Oo Tababar U furtay Shaqaalaha iyo Macalimiinta - Cakaara News
Jaamacada jigjiga Oo Tababar U furtay Shaqaalaha iyo Macalimiinta
Jigjiga(CN) Arbaco, 16ka September 2015, Tababar kafurmay hoolka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdile Xasan oo ay soo diyaarisay jaamacada jigjiga ayaa waxaa ka soo qaybgalay masuuliyiinta ugu saraysa jaamacada jigjiga oo ugu horeeyo madaxwaynaha jaamacada, mas'uuliyiinta kale ee jaamacada, shaqaalaha iyo macalintiinta ka hawlgala jaamacada ee loo qabtay tababarkani.
Furitaankii tababarkan ayaa waxaa ka hadlay Madaxwaynaha Jaamacada Jigjiga mudane Dr. Cabdinaasir Axmed oo sharax dheer ka bixiyay in ujeedada iyo ahmiyada tababarkani yahay mid lagu xoojinayo fidinta istaraatijiyadaha iyo qorshayaasha horumarineed ee uyaala jaamacada fahan buuxana shaqaalaha jaamacada iyo macalimiinta laga siinayo doorka ay jaamacadu ku leedahay meel marinta fulinta qorshaha koboca iyo isbadalka dhaqaalaha ee jaan’qaadka 2,aad. Iyada oo la soo bandhigi doono doorkii ay jaamacadu ku lahayd hirgalinta qorshihii GTP1ka lana eegi doono meelihii ay gol-daloolada ku lahayd si loo gufeeyo kan danbe ee GTP2. Isagoo intaa raaciyay madaxwaynuhu, in ay jaamacada jigjiga kaalin muhiim ah ku leedahay hirgalinta iyo fulinta qorshayaasha horumarineed ee DDSI iyo kan dalkaba soona saarto cudud waxbaratay oo tayo iyo tiraba leh kuwaasi oo ka qaybqaata meel-marinta qorshayaashaasi. Wuxuuna kubooriyay shaqaalaha iyo macalimiintan tababarka qaadanaysa inay dhagaha uraariciyaan casharada kaladuwan ee lasiinayo.
Tababarkan oo socon doona mudo 6 maalmood ah ayaa waxaa iyana dhankooda kahadlay shaqaalaha iyo macalimiinta latababarayo oo sheegay inay diyaar u yihiin inay kafaaiidaystaan waxbarashada tababarkan ay ku qaadan doonaan oo ay waliba gaadhsiin doonaan shaqaalaha iyo macalimiinta kale ee aan fursadan helin.